Jaamacada Göteborg oo bixinaysa koorso lagu baranayo Af-Soomaaliga | Somaliska
Jaamacada Göteborg oo sanadkii 2010 noqotay jaamacadii ugu horeysay ee Sweden ka bixisa barashada luuqada Af-Soomaaliga ayaa dib u bilowday bixinta koorsadaas, iyadoo sanadkaan xili waxbarasheedka dayrta ay jaamacada bixinayso koorso lagu baranayo luuqada iyo dhaqanka Soomaalida. Jaamacada ayaa bixinaysa labo koor oo mida koowaad loogu tala galay macalimiinta ajaanibta u dhigta Swedishka iyo koorso loogu tagalay macalimiinta Af-Soomaaliga u dhigaysa caruurta.
Qofka doonaya in uu noqdo macalin Af-Soomaali ee loo yaqaan (Modersmålslärare) ayaa jaamacada Göteborg ay siinaysaa koorsooyin uu ku helayo 30 dhibcood. Kamuunada Sweden ayaa cabasho weyn ka muujiyay in la’yihiin macalimiin Af-Soomaaliga u dhiga caruurta dhigata iskuulada, iyadoo koorsadaan ay bixinayso jaamacada Göteborg ay tahay mid aad u muhiim ah. Hadaba haddii aad doonayso in aad noqoto macalin luuqada Af-Soomaliga isla markaana aad haysato waxbarashada dugsiga ayay muhiim tahay in aad qaadato waxbarashada jaamacada Göteborg.
Halkaan ayaad ka helaysaa macluumaad dheeri ah: Jaamacada Göteborg.
Maxaa shuruud ah oo ku xiran sxb iiga soo jawaab fadlan
Waa in aad dhamaysay dugsiga sare.
Waan dhameeyay marhore
Dowladda Soomaaliya ku cambaareysay Dowladda Swedan faragelinta ay wasaaradeeda arrimaha dibada ku hayso arimaha gudaha ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda arrimaga dibada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hab dhaqanka dowladda Swedan ku hayso Sacuudiga uu ka mamnuuc yahay hanaanka iyo xeerarka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya wadamada kala madax banaan sida uu qabo xeerarka caalamiga ah.
Ahmiyadda ugu horeysa ayaa ah in la xoshmeeyo madax banaanida iyo qaabka dowladda u sameynayso hanaankeeda dowladnimo iyadoo aan lagu sameynaynin wax fara gelin dibadda ah” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibada Soomaaliya ayaa qoraalkeeda raacisay “Tani waa mabaadii’da aas aasiga oo caalamka uu xasaaniyad u ah,waan sida Soomaaliya ay rajaynaso in ay u dhaqmaan dhamaan wadamada xubnaha ka ah Bulshada caalamka”.
“Diinteena Islaamka waa Diin barako waxayna dadka u keentay in ay ilaaliso sharafta iyo Xoriyadda dhamaan ilmaha Nabi Aadan”.
” Sidaas darteed Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo hanaankeeda garsoorka in ay ka dhiidhiyaan arimahan oo kale, ma ahan dadka iyo dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa dhammaan wadamada caalamka Islaamka” ayaa lagu soo geba gebeeyay Warsaxaafadeedka Wasaaradda Arrimaha dibadda.
March 26, 2015 at 07:04